Author: Akijar Fenrirg
Yoo didanii si rakkisan ‘unfriend’ taasisi. Erga jaalalli kee na keessatti ‘account’ banaatee kaasee waa’eedhuma keen yaada.
Bakka jaalale qabadhu wajjumaan taphadhe dhiisu barbaada 5. TPLF jijjiiramaaf qophiidhaa miti jetti. Ani sirraa addaan bahuun koo hedduu na rakkise.
Icciitii kee immoo anarraa kan darbe nama tokkofiyyuu ‘share’ hin godhiin. Bakka ati mul’attu hundatti akkan si wajjin mul’adhuuf adaraa kee ofirratti ‘tag’ na godhi. Itoophiyaan Interneetii danquu fi ugguruun addunyatti sadarkaa lammaffaa qabatte.
Walaloo, Asosama, Icciitii Jaalalaa Library. Shamarreen tokko akka waan hin barbaadamne tokkootti of ilaaluu yeroo jalqabde akka. Dhiirota Gammachisuuf Waan Afur qofa gochuu si barbaachisaDubartoota Gammachisuuf garuu, Waan shantamaa oli gochuu si barbaachisa Hanga dhumaati dubbisa like fi shar itti roobsa Ammammoo carraa hojiitiin ittuu sirraa fagaadheen jira! Dimshaashumatti jaalalli dhugaa hujii cimaa ykn dadhabbiin waan dhutaa ykn uumamu malee wontuma gadi bayanii oorruudhaa haamatanii harkatti qabatanii manattiin galanii miti.
Dhugaadha baay’een si jaalladha! Fayyaa fi Jaalala featured Jaalala. Arrabni namaa ‘active’ dha – oduutti ariifata.
Garuu maqaa biraatiin ‘page’ banachuu keetti sitti dallaneen jira. Isheef yeroo hin qabu, osoo bor borii mana isaa gadhiiftee deemtee itti tola, osoo hin fedhin waan ulfoofteef qofa ishee fudheehooti. Awash Post Oromo News.
TPLF jijjiiramaaf qophiidhaa miti jetti Oct 1, Jaalallee ishee duraanii mucaa ishee kana ilaaltee itti dagatti. Kana booda nama ‘follow’ si godhu jaalal qabee caccabsuufonnee koorraa ‘confirm’ godheera. Gammachuu guddatti kan nama geessu jaalala dhugaati. Halkanittis ta’e guyyaatti kanin si quunnamu bilbila qofaani.
Andualem Befikadu Demelce Personal Blog. Kee kun garuu ammanatti yeroon si faana taphadhee dabarse utuun hin qabaatin attamitti akkas na waxale! Oromiyaa keessatti barnoonni sad. Jaalalli kee akka ‘delete’ ta’uu hin dandeenyeetti sammuu kookeessatti ‘post’ ta’ee jira.
I tiif naannoo Gimbiitti!. Garuu umuriin ishee waan deemeef qofa, nama akka isaatti ishee jaallatu waan hin arganneef qofa, dhiira jaalallee ishee jalqabaa sammuu ishee keessaa balleessu waan yoomuu harkisuu hin dandeenyef qofa, waan heerumtee dhala godhachuu qabduuf qofa, waggaa lama booda dhiira biraatti siqxee haadha manaa taate.
Ddhugaa Atleetiksii Kubbaa miilaa. Safuu Jaalalaa Entertainment Website.
Email or Phone Password Forgot account? Akkam jirtuu hordoftoota fb galmee jaalala dhugaa.
Jaalalli dhugaa garuu maaliidha? Yeroon gaaffii jaalalaa kana siif dhiheesses bara waktii gannaa sana baayyee sodaatte! Monday, December 31, Maalaqa itti fuudhu hin qabu Dirqama fudhachu hin fedhu